Midowga Yurub oo Iswiidhen cashar ka siiyey hawlihii basaasidda hay’adda FRA - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Tomas Oneborg/Sveriges Radio/Patrick Semansky/TT
Midowga Yurub oo Iswiidhen cashar ka siiyey hawlihii basaasidda hay’adda FRA
La daabacay fredag 10 januari 2014 kl 14.01
Iswiidhen waa in ay ugu noqotaa sharciga ay ku maamusho hay’adda sirdoonka signaalada ee loo soo gaabiyo FRA. Amarkaanina wuxuu la socdey qoraal cusub oo baarlamaanka Midowga Yurub ka soo saaray war-ururinta lagu sameeyey bulshooyinka Yurub.
Kadib kashifaaddii Edward Snowden oo ku saabsanayd sida ay wakaaladda sirdoonka Maraykanka ee NSA u dhegeysatey oo macluumaad uga ururisay bulshooyin badan oo ay ka mid yihiin kuwa Yurub, ayuu guddi baarlamaanka Midowga Yurub bilaabay in uu arrintaan baaritaan ku sameeyo.
Baarlamaanka Midowga Yurub wuxuu qoraalkiisa dhaleeceyn ugu soo jeediyey Iswiidhen habka hay’adda FRA u dhaqantay. Iswiidhen waxay ka mid tahay shan dal oo lagu amray in ay dib u eegaan sharciyadooda lagu maareeyo hawlaha sirdoonka.
Qoraalkaan bilaha soo socda ayuu baarlamaanka Midowga Yurub falaanqeyn doonaa.
Christian Engström oo xisbiga Piratpartiet u fadhiya baarlamaanka Midowga Yurub ayaa idaacadda Ekot u sheegay:
- Waxaan u arkaa arrin wanaagsan! Waxaa soo ifbaxay warar sheegaya in ay FRA gacan ka siisay Maraykanka in ay u galaan hababka kombiyuutarada, iyo in ay dabagal basaasid ah ugu sameysey dad rayid ah hab ka soo horjeeda qaraarka Yurub oo khuseeya xuquuqda aadanaha. Waayo xuquuqda aadanaha waxaa ka mid ah in ay dadku si gaar ah isu la xiriiri karaan.